Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Mikasa ny hiditra ao amin'ny UNWTO i Etazonia
Vaovao Mamaky Andorra • Azerbaijan Breaking News • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovaom-panjakana • Vaovao • Fanambarana ho an'ny mpanao gazety • Fandefasana gazety • Tourism • Travel Wire News • malaza ankehitriny
Ny fizahan-tany amerikana sy ny UNWTO dia manao tantara ao Baku, Azerbaijan. Ny Fikambanana Iraisam-pirenena momba ny fizahan-tany (UNWTO) dia eo am-panatanterahana ny fivorian'ny mpanatanteraka ao Baku, Azerbaijan. Androany ny departemantan'ny varotra amerikana dia nanambara ny fikasan'i Etazonia ho lasa mpikambana manaraka ao amin'ny UNWTO. UNWTO dia niezaka nandresy lahatra an'i Etazonia ho lasa mpikambana nandritra ny taona maro. Ity dia azo heverina ho anjaran'ny fikambanana UN Affiliated.
I Etazonia dia mpikambana mpanorina ao amin'ny UNWTO ary rehefa afaka taona maro dia nanatrika ny filankevitra niaraka tamin'ny fikasana hiditra ao amin'ny fikambanana indray.
"Manantena izahay hiara-hiasa amin'ny famporisihana ny fizahan-tany manerantany," hoy i Emma Doyle, lefitry ny mpiasa lefitra sady lefitra
Mino ny Insiders fa ho mpamadika lalao io, tsy ho an'ny UNWTO ihany, fa ho an'i Etazonia sy ny fidiran'ny Etazonia ao anatin'ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany. Nandritra ny am-polony taona maro dia tsy nidina ambony latabatra mihitsy i Etazonia, ary ity hetsika ity dia mety tsy hitondra an'i Etazonia amin'ny sary fotsiny fa eo amin'ny seza eo aloha. Io dia hamela fomba ara-drariny sy voalanjalanja kokoa hanoherana ny fitaoman'i Shina sy i Russia ao amin'ity orinasa manerantany ity.
Tamin'ny tatitra vaovao voalohany dia nitatitra ny eTN momba ny drafitra ho an'i Etazonia mikasa ny hiditra ao amin'ny UNWTO mety noresahina tamin'ny a sakafo hariva amin'ny Alahady. Ny minisitry ny fizahantany ao Jamaika, Bartlett, dia niresaka momba ny olana tamin'ireo mpiara-miombon'antoka amin'ny tambajotra fizahan-tany momba ny fizahan-tany mandritra iny sakafo hariva iny.
eTurboNews dia nampahafantarin'i Isabel Hill, Tale, Birao Nasionaly momba ny fizahantany sy fizahan-tany ao amin'ny Departemantan'ny varotra Amerikana. ary ny minisitry ny fizahantany any Jamaika, Bartlett fa tsy noresahina nandritra ny sakafo hariva io lohahevitra io. Ny minisitry ny fizahantany any Jamaika dia tsy nandray anjara tamin'ny fandresen-dahatra an'i Etazonia haneho fikasana ary hiditra ao amin'ny UNWTO.
eTN miala tsiny noho ny fikorontanan-tsaina eo amin'ny fampandrosoana ity tatitra vaovao ity.